‘गर्भ हाम्रो, त्यसमा हाम्रो अधिकार हुनुपर्छ । यसमा अदालत वा राजनीतिक निर्णयको द'बाब किन ? »
युरोपेली देश पोल्याण्डमा पहिलेदेखि कै कडा गर्भप’तनको कानून थप कडा बनाएपछि ३० हजारभन्दा बढी महिला सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले बिहिबार अदालत बाहिर र सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुको घर बाहिर प्रदर्शन गरे ।
महिलाले गर्भप’तनलाई संवैधानिक गराउन माग गरिरहेका छन् । आन्दो’लनकारी महिलाको भनाई थियो, ‘गर्भ हाम्रो, त्यसमा हाम्रो अधिकार हुनुपर्छ । यसमा अदालत वा राजनीतिक निर्णयको द’बाब किन ? हामीलाई यो कानूनबाट स्वतन्त्रता दिइयोस् ।’
वास्तवमा पोल्याण्डको गर्भप’तन कानून सन् १९९३ मा पारित भएको थियो । यस अनुसार गर्भप’तन त्यो स्थितीमा मात्रै सम्भव जब आमाको ज्यानलाई ख’तरा छ । त्यसमा पनि यस्तो १२ हप्ता सम्मको गर्भलाई मात्र गर्न सकिन्छ । यदि कोही डाक्टरले अवैधानिक रुपमा गर्भप’तन गराउँछ भने उनलाई ८ वर्षसम्मको जेल स’जाय हुनसक्छ । एजेन्सी